Izindaba - Ukunciphisa Izinga Lokulimala Kwengozi Nokuqonda Okulungile Kwengilazi Yemoto
Selokhu kwavela izimoto, ingilazi ibingahlukani. Ingilazi yemoto yokuqala yaba neqhaza kuphela ekumelaneni nomoya namakhaza, imvula nothuli. Ngokuthuthuka kwemboni yezimoto, izimo zomgwaqo ziyaqhubeka nokuba ngcono, nesivinini sezimoto siyanda. Ukubaluleka kwengilazi yemoto kubonakala kancane kancane. Ingilazi yezimoto ayinikezi nje kuphela abagibeli umbono omuhle lapho ushayela imoto kodwa futhi hhayi uma kwenzeka izingozi eziphuthumayo. Ukulimala komshayeli nabagibeli nakho kuyadingeka ukuthi kube lula futhi kube nemisebenzi eminingi.
Ingilazi yezimoto idinga ukusebenza kahle kwe-optical ukuqinisekisa ukubonakala okuhle komshayeli. Ike yabhekana noshintsho ukusuka kusicaba kuya kokugobile, okuvamile kuya kokuqinisiwe, okugcwele umoya opholile kuya kokulinganisela kancane, ingilazi epholile ukuya engilazini elayiniwe, kanye nengilazi enezendlalelo ezintathu. Inqubo yokuthuthukiswa kwe-interlayer kuya ku-multi-layer interlayer kanye nengilazi esebenzayo.
Ingilazi yemoto yayivame ukuba ngamawindi omoya. Ingilazi ifakwe ngaphambili ekupheleni kwenqola ukuze kusindiswe umshayeli emoyeni nasemvuleni. Kuze kube manje, amawindi omoya ezimoto zesimanje ngokuvamile agobile, ngezinga elithile lokugoba phezulu, phansi, kwesokunxele, nakwesokudla. Idizayini yendawo egobile inganciphisa ukumelana komoya ngokombono we-aerodynamics, futhi uguquko olubushelelezi phakathi konqenqema lwefreyimu yefasitela nobuso bomzimba wemoto nakho kukhulisa ukusebenzisana okuphelele kanye nobuhle ngokubukeka. Ngaphezu kwalokho, ingilazi egobile inamandla aphezulu, futhi ingilazi encane ingasetshenziswa ukunciphisa isisindo somzimba wemoto. Ingilazi yezimoto yamanje ikakhulukazi ihlanganisa ingilazi elaminethiwe, ingilazi epholile, kanye nengilazi epholile yesifunda. Phakathi kwabo, ingilazi ye-laminated inokuphepha okuphezulu kakhulu, ngakho-ke ukusetshenziswa kwayo kuvame kakhulu.
Ingilazi ethambile iwukucinywa kwengilazi evamile ukwenza ukucindezeleka okuthile kwangaphakathi esakhiweni sangaphakathi, ngaleyo ndlela kuqinise amandla engilazi. Uma ithintekile futhi iphukile, ingilazi izohlukana ibe yizicucu ezincane ezinemiphetho ebuthuntu, okungelula ukubangela umonakalo kubahlali. Ingilazi epholile yesifunda iwuhlobo olusha lwengilazi epholile. Icutshungulwe ngokukhethekile ukuze ikwazi ukugcina izinga elithile lokucaca emifantwini yengilazi lapho iphulwa umthelela. Ingilazi evamile eqinile ayifanele ukusetshenziswa njengewindi langaphambili, ngoba uma iphukile, iphenduka inqwaba yemfucumfucu, iwe njengempophoma, ivimbe umshayeli ukuthi angaboni kahle, okungahambisani nokusingatha izimo eziphuthumayo. Ngale ndlela, ezinye izimoto ezimaphakathi nasezingeni eliphansi zisebenzisa ingilazi epholile yesifunda. Lapho ingilazi iphuka, ingilazi emkhakheni wokubona womshayeli izokwakha izingcezu ezifana nosayizi we-lens, ukuqinisekisa ukuthi insimu yombono womshayeli ayithinteki, futhi ukuphepha kuphezulu.
Ingilazi ebizwa ngokuthi i-laminated iwukusebenzisa ifilimu yepulasitiki yokunamathisela ebonakalayo ukuze inamathele phakathi kwezingqimba ezimbili noma ezintathu zengilazi, ehlanganisa amandla nokuqina kwepulasitiki nokuqina kwengilazi ukwandisa ukumelana kwengilazi ukuze iphule. Lapho ingilazi iphukile, ama-glass shards azonamathela ndawonye, ​​ukuze izingcezu zeglasi zingahlakazeka futhi zilimaze abantu, futhi uqinisekise ukuthi umshayeli unomkhakha othile wokubheka ukubhekana nesimo esiphuthumayo. Ngaphezu kwalokho, ukuguquguquka nokumelana nokungena kwengilazi elaminethiwe ngemva kokwengeza ifilimu ye-PVB kuyathuthukiswa, okungavimbela umshayeli ukuba akhiphe ikhanda lakhe ngefasitela lemoto ngenxa yokungabi namandla okweqile ngesikhathi sokubhuleka okuphuthumayo. Ukuze kuncishiswe ukulimala kwengilazi kubantu ngesikhathi sezingozi, amawindi angaphambili angaphambili ezimoto ikakhulukazi ayingilazi epholile ene-laminated kanye nengilazi epholile, ekwazi ukumelana nomthelela onamandla. Ngaphezu kwalokho, uhlobo lwefilimu olungaqhumi ludumile emakethe. Ifilimu ekhethekile ixhunywe engilazini yemoto, engagcini nje ngokuqinisa ukusebenza kwengilazi yokuvimbela ukuqhuma kodwa futhi enomthelela wokuvikelwa kwe-UV nokushisa ukushisa.
Kodwa-ke, uma izinto ezihlukene zengezwa engilazini ye-laminated, imisebenzi ekhethekile eyengeziwe ingafakwa engilazini ye-laminated. Ingilazi yezinhlamvu iyifilimu yamakhemikhali enamandla kakhulu futhi esobala ehlanganiswe phakathi kwengilazi elaminethiwe. Lokhu akukwazi nje ukuvimbela ngempumelelo izinhlamvu ekudutshulweni kodwa futhi kunokusebenza komthelela wokulwa nokuqhuma, ukuvimbela ukuqhuma, ukunqanda ukudlidliza, futhi akukho mifantu ngemva komthelela. Kungenzeka futhi ukufaka isangweji ucingo oluncane olungaguquki kungqimba lwengilazi oluphakathi nendawo ukuze umiselele uthi lwe-whip, olungagwema inkinga yokudonsa i-antenna uyikhiphe ngaphandle ngaphandle kokugqwala, ngokuvamile engilazini ye-windshield engaphambili. Noma ungqimba lwefilimu enemibala luhlanganiswe ngaphezu kwengilazi ye-windshield yangaphambili, kusukela ekujuleni kuya ekujuleni, okudlala indima yokuthungatha ngezinga elithile. Uma ifilimu ekhanyayo enayiloni yokushisisa ifakwe phakathi kwezingilazi ezimbili ezinalayini, ingadlala indima yokuvikela ukushisa. Ingavumela ukukhanya okubonakalayo kwelanga kungene, futhi iningi lentambo yokushisa ye-spectrum eseduze ne-infrared ingaboniswa emuva, ngaleyo ndlela yehlise izinga lokushisa emotweni.
Ngokuhlanganiswa okuqhubekayo kobuchwepheshe obuphezulu nobusha ekukhiqizeni ingilazi yezimoto kanye nokuthuthukiswa okuqhubekayo kokusebenza kwengilazi yezimoto, izidingo zabanikazi bezimoto zokuncibilika, ukumelana namanzi, ukucasha, kanye nezakhiwo ezivimbela ukungcola kwengilazi yezimoto ziyaqhubeka nokwanda, okuphoqelela umkhiqizi. wengilazi yezimoto Ukwengeza njalo izici ezintsha.
Isikhathi sokuthumela: 16-11-21